Sangano reRozaria Memorial Trust Robatsira Vanasikana Vanoroodzwa Vachiri Vadiki
Zvita 10, 2017
Rosaria Memorial Trust beneficial
Vanhu vakawanda vakaungana pachirongwa chekurangarira mhirizhonga dzinoitika mudzimba, pasi pechirongwa che 16 Days of Activism Against Gender Based Violence chakaitirwa paSt Martins Magaya Primary School kwaMurehwa, uko vanhu vakaungana nemusi weChishanu.
Vachitaura pachirongwa ichi, Va Freddy Ngorima, avo vanoshanda kumahofisi ehurumende kuShamva, vakati vari kuedza zvikuru kubatsira vanasikana vakamanikidzwa kuroorwa vachiri vadiki nekuvaendesa kuchikoro kuitira kuti vaenderere mberi nedzidzo yavo.
Vakati sangano reRozaria Memorial Trust rakabatsira chaizvo kubadhadharira madzimai echidiki aya kuti vadzokere kuchikoro zvokuti pave nevatanhatu vakatopeza dzidzo kuMadziwa Teachers College.
Dunhu reMashonaland Central ndiro rine vanasikana vakawanda kudarika mamwe matunhu mukumbunyikidzwa kwekodzero dzavo kuburikidza nekuroorwa vachiri vadiki.
Mumwe wemadzimai echidiki akamanikidzwa kuroorwa aine makore gumi nemana, Amai Tinotenda Moyo, vakaudza vanhu vakaungana pachirongwa ichi, zvakaitika muhupenyu hwavo, pamwe neshuviro yavo.
Vachitaurawo pagungano iri, Muzvare Natalie Ruze, vakati vakabatwa chibharo vaine makore gumi mukomana wacho akatsvagwa asi haana kuwanikwa. Vanoti vakabatsirwa kuita kosi yekusona neveRozaria Memorial Trust uye vakakurudzira vechidiki kuti vazvibate.
Mumwe mudzimai wechidikai, Farisai Nyarambi, anoti akaroodzwa aine makore gumi nematanhatu.
"Ndakaroodzwa ndiine 16 years mushure mekung amai vangu vashaya, hanzvadzi dzangu dzikati hatidzidzise mwana musikana. Saka ndakazoroorwa ndine 16 years idzodzo ndobva ndaita mwana saka murume wangu akazoshaika ndiine 27 years. Saka shuwiro yangu yanga iri yekuti dai ndawanawo basa rekuita remaoko ndachengeta mhuri yandinayo," Nyarambi akaudza gungano iri.
Sangano reRozaria Memorial Trust rakaumbwa nAmai Nyarazai Gumbonzvanda, kubudikidza naamai vavo, muchakabvu Rozaria Marumisa Dizha, avo vakasiiswa chikoro vachiri pasi pezera rokurorwa, vakararama hupenyu hwairwadza vari mudzimai wechidiki.
Amai Gumbonzvanda ndivo AU Goodwill Ambassador For Ending Child Marriages, kubudikidza nenyaya dzavari kuita dzokusimudzira madzimai nevanasikana munyaya dzekuroodzwa vachiri vadiki.
Amai Gumbonzvada vakati vanofara kuti hurumende itsva ine gurukota rinomirira vana vadiki nemadzimai.
Sekuru vaAmai Gumbonzvanda, VaPascal Dheka, vakati mushakabvu Amai Rozaria Marumisa Dizha ndivo vekutanga uye vekupedzisira kuroodzwa nenzira yakaipa iyi.
"Hakuchisina kuroodza mwana ari mudiki. Pakaitwa mhosvo, pakaitwa mhosva ...it was an error kuti mai vako iwe muzukuru varoodzwe vachiri mudiki," VaDheka vakaudza Amai Gumbonzvanda mhomho yevanhu ichinzwa.
Gungano iri rakapindwa nemasangano akasiyana siyana anosimudzira kodzero dzemadzimai, kusanganisirawo madzimai akabva kuKenya ne Uganda.